यौन-स्वास्थ्य « Pana Khabar
डाक्टरले काम गरिरहेको वेला हेरिरहंदा चमत्कार भए जस्तै लाग्छ, यो वाक्य पुलित्जर पुरष्कार विजेता न्यूयोर्कटाइम्सका चर्चित पत्रकार निकोलेस क्रिस्तोफले नेपालका प्रसिद्ध आंखा डाक्टर सन्दुक रुइतका वारेमा लेखेका हुन् । गत आइतवारको
बालकोटकी ५५ वर्षकी सीता थापामा अचम्मको स्वाभाव देखिन थालेको छ। उनलाई आफ्नो नाम याद छैन। आफ्नै आफन्तहरुलाई समेत चिन्दिनन्। दैनिक सामान हराउँछिन्। पैसाको कारोबार बिर्सिन्छिन्। अनावश्यक भड्किने स्वाभावको कारण दिनहुँ
दाँत सफा नगर्ने बानीले गर्दा, सुत्ने तरिका नमिल्दा अनि केही खानेकुराह खाँदा विहान स्वास गनाउने गर्दछ । राति सुत्दा मुख सुक्खा भयो भने पनि स्वास गनाउने गर्दछ । हुन त दुर्ग्न्धित स्वास हुनुका
– डा. ललितकुमार मिश्र, जसरी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि दिनको एक –दुई पटक दिल खोलेर हाँस्ने गर्नाले फाईदा हुन्छ । त्यसैगरि कहिलेकाही थोर-बहुत रुँदा पनि मन हल्का हुनुको साथै स्वास्थ्यलाई पनि
कति पटक यौनसम्पर्क राख्ने भन्ने कुराको कुनै नियम छैन ।यो पूर्ण रुपले तपाईंको खुशीमा भरपर्छ । तर, यो विषयमा भएको एक अध्ययनमा केहि निश्कर्ष निकालिएको छ की उमेर अनुसार मानिसले
गर्भावस्थामा हुने संक्रमणमध्ये सबभन्दा बढी मूत्रनलीमा हुन्छ, जसको कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ किन ?
-डा. सुमनराज ताम्राकार गर्भावस्थामा व्याक्टेरियाबाट हुने संक्रमणमध्ये सबभन्दा बढी मूत्रनलीमा हुन्छ, जसको कुनै लक्षण नदेखिन सक्छ। गर्भवती महिलामध्ये करीब ८ प्रतिशतलाई मूत्रनलीको तल्लो वा माथिल्लो भागमा संक्रमण हुन्छ । गर्भावस्थामा
बाथ रोगका लक्षण र बच्ने उपाय
बाथरोग एक प्रकारको ‘अटोइम्युन डिजिज’ हो। अर्थात् शरीरको रोग निरोधक शक्तिले शरीरको अंगलाई असर गर्दा बाथरोग हुने गर्छ। बाथरोग धेरै प्रकारका हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका बाथले विभिन्न लक्षण देखाउँछन्। तर, सबैजसो
आइ-पीलको भरमा लिभिङ टुगेदर’मा रहेका जोडी
-बलराम प्यासी ‘लिभिङ टुगेदर’मा रहेका जोडी असुरक्षित गर्भ रोक्न ७२ घण्टे चक्की (आइ-पील ) मा निर्भर हुने गरेका पाइएको छ । उनीहरूमा एउटै चाहना हुने गरेको छ– नियमित यौनसम्पर्क पनि
सेक्स पार्टनरको पनि इच्छा बुझेर बढ्नुस र दुवैलाई भरपूर आनन्द हुने किसिमले यसरी गर्नुस
डा.सुबोधकुमार पोख्रेल कसरी आनन्दित र स्मरणीय बनाउने यौन सम्बन्ध यौन एक प्रकारको प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यौनलाई लिएर कयौं किसिमका सकारात्मक र नकारात्मक कुरा हुनु खासै नौलो कुरा होइन ।
यसरी लामो समयसम्म सेक्स गर्न सकिन्छ !
-डाक्टर राजेन्द्र भद्रा यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ । किन्सेले गरेको अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै
म २५ वर्षीया अविवाहित युवती हुँ । मैले कसैसँग यौनसम्पर्क गरेकी छैन । चार–पाँच महिना अघिदेखि मासिक श्राव ८–१० दिन पछि सरिरहेछ । ममा पीडालगायत अन्य कुनै पनि समस्या छैन